Waa ayo MUUSE GEELLE, guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashada dalka? - Caasimada Online
Home Warar Waa ayo MUUSE GEELLE, guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashada dalka?
Waa ayo MUUSE GEELLE, guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashada dalka?
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal (FEIT) ee Soomaaliya oo maanta qabtay doorasho ayaa waxaa lagu doortay guddoomiye cusub.
Guddoomiyaha guddiga ayaa waxaa loo doortay Muuse Geelle Yuusuf (Faroole) oo kasoo jeeda gobolka Bari, beesha Cali Saleebaan, kaddib markii dhowaan xilka laga qaaday guddoomiyihii guddigaas Maxamad Xasan Cirro.
Waa kuma Muuse Geelle Yuusuf (Faroole)?